पूर्वएआईजी डा.कृष्णकुमार तामाङ भन्छन् : ठाउँकाे ठाउँ गाे*ली हा*न पाउनुपर्‍याे! – " कञ्चनजंगा News "
पूर्वएआईजी डा.कृष्णकुमार तामाङ भन्छन् : ठाउँकाे ठाउँ गाे*ली हा*न पाउनुपर्‍याे!
No Comments on पूर्वएआईजी डा.कृष्णकुमार तामाङ भन्छन् : ठाउँकाे ठाउँ गाे*ली हा*न पाउनुपर्‍याे!
एसपीका रूपमा सशस्त्रमा पसेका डा. कृष्णकुमार (केके) तामाङले क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख(डीआईजी)का रूपमा पूर्व, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कमान्ड सम्हाले।
र, सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख भएर पनि काम गरे। विद्यावारिधि पनि सीमा सम्बन्धमै गरेका उनले जागिरबाट ३ वर्षअघि अवकाश पाएका हुन्।उनीसँगको अन्तर्वार्ता आज बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले अन्तर्वार्ता छापेको छ। विभिन्न प्रश्नमध्ये यहाँ एउटा प्रसंग प्रस्तुत गरिन्छ :
भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ तरंग पैदा भएको छ। यसलाई कसरी लिने?
यो नयाँ रोग होइन, पुरानै व्याधी हो। यसलाई हल गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दुईपक्षीय छलफल हुन जरुरी छ। त्यो वार्तामा राजनीति गर्ने मात्र होइन, विज्ञ, प्राविधिक, तत्सम्बन्धी ज्ञातालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ। स्थायी उपाय भनेको सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनु हो।
नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि गौहत्या बर्जित छ। तर त्यही नाकाबाट गाई, गोरु तस्करी गरी बंगलादेश पुर्याइन्छ। यसरी तस्करी हुुुँदा सीमा सुरक्षा गर्ने शसस्त्रलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने अख्तियारी दिनुपर्यो नि! त्यो अख्तियारी नदिँदासम्म नाम मात्रको सशस्त्र फौज गठन गरेर के काम? अझै सीमामा सेना र ड्रोन पठाउने कुरा उठ्दै छ। त्यहाँ रोबोट नै पठाइए पनि जबसम्म अधिकार, अख्तियारी, कार्यादेश र क्षेत्र निर्धारण हुँदैन तबसम्म कसैले केही परिणाम ल्याउन सक्दैन।
← श्रममन्त्रीबाट गोकर्ण विष्ट बाहिरिएसँगै मलेसियाले माग्यो नेपालसँग ३१ हजार कामदार, कुनमा कति ? → त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४३८ जनाका लागि रोजगारी, यस्तो छ प्रकृया (सूचना सहित)